Walking & Hiking Archives - IntoKildare
Mivoaha any ivelany
Mandeha an-tongotra sy mandeha an-tongotra
Trano misy ny faritra ambanivohitra tsara tarehy indrindra any Irlandy, County Kildare dia toerana mahafinaritra ho an'ireo izay mankafy manao ny tsara indrindra eny ivelany.
Na tianao ny fitsangatsanganana ala na fitsangatsanganana amoron-drano mahafinaritra dia misy safidy lehibe ao amin'ny Co Kildare. Fanampin'izay, ny lemaka malalaka sy ny tsy fisian'ny havoana dia midika fa ny County Kildare no toerana mety indrindra ho an'ireo mpandeha an-tongotra sy mpizaha tany amin'ny taona sy fahaizana rehetra.
Trano sy zaridaina
Burtown House any Co. Kildare dia trano Zeorziana taloha teo akaikin'i Athy, miaraka amina zaridaina 10 hektara mahafinaritra ho an'ny besinimaro.
Hiaina ny famirapiratan'ny trano Castletown sy ny valan-javaboary, tranon'ny Palladian ao amin'ny County Kildare.
Trano sy zaridaina Coolcarrigan
Coolcarrigan dia oasis miafina miaraka amin'ny zaridaina 15 hektara mahafinaritra feno hazo sy voninkazo tsy fahita firy sy tsy mahazatra.
Trano Norman tamin'ny taonjato faha-12 misy zavatra manan-tantara mahaliana sy tsy mahazatra.